‘तीन महिना भयो, कुवेतमा एक छाक खाएर जीवन धानिरहेका छौं’ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
‘तीन महिना भयो, कुवेतमा एक छाक खाएर जीवन धानिरहेका छौं’
असार १७, २०७७ बुधबार १०:२७:४७ | बेदानन्द जाेशी
काठमाण्डौ – दुई, चार वर्ष परिवारसँग टाढा भए पनि धन कमाउने र बाँकी जीवन परिवारसँगै रमाउने । परदेश जाने धेरैको साझा सपना हो यो ।
तर कमाउन गएको मानिस आफैं भोकभोकै बस्नुपर्ला भनेर कसले सोचेको हुन्छ र ? साहुसँग ऋण काढेर भविष्यको जोहो गर्न सपनाको सहर जानेहरुले पक्कै पनि यस्तो सोचेका हुँदैनन् ।
कुवेतको फरवानियाँ भन्ने ठाउँ । तीन महिना अघिसम्म बेकरी पसलमा उनीहरुको दैनिकी बित्थ्यो । तर अप्रिल १२ मा लकडाउन भएदेखि सबैजना एउटा बन्द कोठाभित्र लकडाउन खुल्ने प्रतीक्षामा बसिरहेका छन् । यी तीन महिनामा भोको पेटसँग सम्झौता गर्नुपरेको छ, दिनमा एक छाक मात्र खाएर ।
‘यो तीन महिनाको जस्तो समस्या त कहिल्यै भोगेको थिइनँ’ अदिप भन्नुहुन्छ, ‘तीन महिनादेखि एक छाक मात्र खाएर जीवन धानिरहेका छौं ।’
नेपालमा हुँदा रोजगारी नभए पनि यसरी पेटसँग सम्झौता गरेर बस्नु परेको थिएन । तर कुवेत पुगेपछि अहिले तीन महिनाको अवधिमा जीवनको नमिठो स्वाद भोगिरहेका छन् अदिपलगायत सबैजनाले ।
‘लकडाउन हुनुभन्दा पहिले पनि साहुले दुई महिनाको एक पटक तलब दिन्थे’ अदीप भन्नुहुन्छ, ‘लकडाउन भएपछि त तलब दिएकै छैन, काम गरेको दुई तीन महिनाको तलब रोकेर राखेको छ हामीहरुको ।’
त्यसपछि साहुले फोन उठाउनै छाडे । सबैजना निकै आत्तिए । आत्तिनु स्वभाविक पनि हो । अर्काको ठाउँमा, त्यो पनि कर्फ्यु लागेको बेला । साथमा पैसा छैन, खाद्यान्न सकियो । भोकभोकै मरिने हो कि भन्ने चिन्ताले पिरोल्न थाल्यो ।
सहयोगको लागि उनीहरुले नेपाली दूतावासमा फोन गरे । तर दूतावासले एकले अर्काेलाई, अर्कोले अर्कोलाई फोन गर्न मात्र लगाइरहे । आफ्नो गुनासो सम्बोधन भएन भन्नुहुन्छ अदिप ।
त्यसपछि के गर्ने ? कसैसँग पनि कुनै उपाय थिएन । भोको पेटले न उपाय सुल्झाउँछ न त हौसला नै दिन्छ ।
खान बस्न निःशुल्क भन्ने शर्तमा सबैजना कुवेत पुगेका हुन् । त्यही अनुसार थियो पनि । सबैजना साहुले भाडामा लिएर राखेको फ्ल्याटमा बस्थे । तर लकडाउन भएपछि साहुले फ्लाइटको भाडा नतिरिदिदा फ्ल्याट साहुले बिजुलीको तार, वाइफाइ काटिदिने गरेको अदिप बताउनुहुन्छ ।
‘एकसय ३० केडी भाडा तोकेको छ जहाजको, हामीसँग एक कौडी पनि छैन’, अदिप भन्नुहुन्छ, ‘साहूले काम गरेको महिनाको तलब दियो भने त्यसैमा जान हुन्थ्यो, तर साहु पनि फोनै उठाउँदैन ।’
आममाफीमा सहभागी भएकाहरुलाई त त्यहाँको सरकारले आफ्नै खर्चमा नेपालसम्म ल्याइदिएको छ । तर आफूजस्तै समस्या भएकाहरुलाई सरकारले के गरिरहेको छ अदिपलाई थाहा छैन ।
अन्तिम भरोसा भनेको साहु नै भए पनि उसले आफूले बेकरी बेचिसकें तिमीहरु जे गर्छौ गर भनेर फोन उठानउन छाडेपछि अदिप लगायत सबै जना आत्तिएका छन् ।
‘न त सरकारले नै केही गर्छ न त साहु नै जिम्मेवार छ’, अदिप प्रश्न गर्नुहुन्छ, ‘के अब हामी भोकभोकै छटपटाएर मर्ने त ?’